San Htun's Diary: သီရိမင်္ဂလာဈေး
ဒီဇင်ဘာ ရန်ကုန်ကို အလည်ပြန်နေချိန်မှာ သီရိမင်္ဂလာဈေးကို ယခင်ကြည့်မြင့်တိုင်မြို့နယ်ကနေ လှိုင်မြို့နယ်၊ ပိတောက်ချောင်းအနီး ပြောင်းရွှေ့ချိန်နဲ. ကြုံကြိုက်လို့ ကြားခဲ.ရသမျှ ဈေးသူဈေးသားတွေရဲ. ဒုက္ခတွေကို ဘလော့ကနေ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
မိုးမလင်းခင်ကတည်:က မှော်ဘီတိုက်ကြီ: အနယ်နယ်ကလာတယ်. ကားတွေ ညနေဆိုလည်: ပျံကျ ဈေးသည်တွေနဲ. ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားပြီ: တနိုင်ငံလုံးကို အသီးအနှံတွေ ဖြန်.ဝေတယ်. ၂၄ နာရီမအိပ်တယ်.ဈေးလို့တောင် ဆိုလောက်တယ်. ဈေးကို အေးရှားဝေါက ဆိပ်ကမ်:ကို တိုးချဲ.ချင်တာနဲ.ပဲ ပြောင်းရွှေ.ရမယ်လို့ ဆိုလာပြန်တယ်။အကြောင်းပြချက်ကတော. သီရိမင်္ဂလာဈေးကို ဝင်ထွက်တယ်. ကားတွေက ယဉ်ကြောပိတ်ဆို.လို့ ပါတဲ.။
များများရချင် သီရိမင်္ဂလာဈေးကို သွားဝယ်။ ပေါမှပေါ။ဆိုင်ကြီ:တွေကတော. အနည်:ဆုံး ၅၀သားလောက်မှ စရောင်းတာ။ ၂၅သားလောက်ပဲ ဝယ်ချင်ရင် ဈေးအပြင်ဖက်မှာ ရောင်းတယ်. ဗျတ်ထိုး ဈေးသည်ဆီက ဝယ်။
တခါတလေ အမေနဲ. လိုက်ပြီ: မြေပဲ၊ပြောင်းဖူး၊မင်းကွတ်သီးတွေ လိုက်ဝယ်ဖူ:တယ်။ သင်းခိုင် ဒူးရင်းသီး စားချင်တိုင်း သွားဝယ်။ ဈေးဝယ်ကျွမ်:တယ်. ဖြိုးနဲ. သင်းခိုင်က ဒူးရင်းသီး ဘယ်လိုရွေးရသလဲဆိုတာ သင်ပေးပေမယ်.လည်: ကောင်းတာကျတာ နည်:နည်: ။ဒါပေမယ်.လည်: တခြားဈေးတွေထက် သက်သာလို့ ကို သွားဝယ်ကြဆဲ။ အညွန်း ကောင်းနေတာနဲ.ပဲ လိုရင်း မရောက်တော.ဘူး။
တချို.အခန်:တွေဆို သိန်:ရာချီ တန်တာ။ နေရာ အကွက်အကွင်းကောင်းပိုင်တယ်.သူတွေကို နေရာ အ ကွက်အကွင်းကောင်းတွေ ပြန်ပေးရင် Complaint တက်မှာ စိုးလို့နဲ.တူပါရဲ။ ဈေ:သစ်အတွက် နေရာချထားပေးပုံက မဲနှိုက်ပြီ: နေရာချထားပေးတယ်။ တို.များ ငယ်ငယ်ကျောင်းတက်တုန်းကတော. နေရာချထားပုံက မျက်စိမှုန်တယ်. မျက်မှန်သမားတွေကို ရှေ့ဆုံးတန်:မှာ ထား။ အရပ်နိမ့်မြင့်အလိုက် နေရာချတာ။ မူလတန်:တုန်းကတော. အရပ်က မပုမရှည် ဆိုတော.အလည်လောက်မှာ ထိုင်ရတယ်။ အလယ်တန်:တက်တော. မျက်မှန်တဝင့်ဝင့် ဆိုတော. ရှေဆုံးတန်:မှာ။ တက္ကသိုလ်တက်တုန်းကတော. သူငယ်ချင်းတွေက အလည်တန်: ရှေ့ဆုံး ၂တန်: ကို အမြဲလုခဲ.ကြတာပေါ့။ ဒီလိုမျိုးသာ နေရာချထားကြေးဆို ဘာပြောကောင်းလိုက်မလဲ။
မဲနှိုက်ပြီ: နေရာချထားပြီ:သကာလ ဦးလေးကြီ: တယောက်မှာ မူးတယ် မူးတယ်နဲ. ပြောပြီ: လဲကျသွားတာ တခါတည်: အသက်ပါသွားပါရောလား။ နေရာအကွက်အကွင်းကောင်း ပိုင်တယ်.သူက မကောင်းတယ်.နေရာကို ရလို့။ ပြောင်းတယ်. နေ.ကလည်: ငိုကြယိုကြ မျက်ရည်စက်လက်နဲ. ဘေးက မြင်ရတယ်.သူတောင် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ်။
နေရာသစ်က ပိတောက်ချောင်း ရဲစခန်:အနီးက ကွင်းပြင်ကျယ်။ ပိတောက်ချောင်းက ရေတက်တာ ဒူးဝက်လောက် ရောက်တယ်။ လျှပ်စစ်မီးက ဈေးဖွင့်ပွဲ နေ့မှ ရမှာမို့လို့ သီရိမင်္ဂလာ ဈေးသူဈေးသားတွေကတော.ကတ်တားကို မနက် ဈေးလာချိန် သယ်လာလိုက် ဈေးသိမ်းချိန် ပြန်သယ်သွားလိုက်။မြစ်ကမ်:ဘေးနား ကပ်ရက်ရှိနေတယ်. ငါးပိ ငါးခြောက်တန်:ကတော သူတို.ဆီကို ကုန်းလမ်:ကရော၊ ရေလမ်:ကရော လာရောက်နိုင်ပါကြောင်း ကြေငြာပါတယ်။ဈေးမဖွင့်မီကတော. နေရာအကွက်အကွင်းကောင်းတွေ ဈေးမြောက်ခဲ.ပေမယ်. ဈေးသစ်ဖွင့်ပြီ:ချိန်မှတော. ဈေးအခြေအနေရယ်၊ ပြောင်းဦးမယ် ဆိုတယ် သတင်းတွေကြောင့် ဈေးကွက်က ဝယ်သူ မရှိသလောက် အေ:စက်သွားပြီ: ဈေးလည်:ထိုးကျသွားခဲ.တယ်။မှော်ဘီ တိုက်ကြီ: ဟိုင်းလပ် ကားတွေ ယခင် လှည်:တန်: လမ်:ကြောင်း ကနေ ဘုရင့်နောင်ဈေ:ဖက် လမ်:ကြောင်း ပြောင်းမယ်လို့လည်: ကြားသိရတယ်။
ရုံးကြီ:လမ်:မှာ နေထိုင်တယ်. အညာသူအညာသာ: ကျွန်မဆွေမျိုးများ အဲလေ ရောင်လို့ အညာသူအညာသာ: ဈေးသူဈေးသားများကတော. ဈေးနဲ. အတူ ပါသွားကြလို့ ဈေးသစ်အနီးက တိုက်ခန်:ငှါးခတွေတောင် မြောက်သွားတယ်။ အမယ် အညာသူအညာသာ:တွေက ခတ်မှီတာနော်။ တိုက်ခန်:၁ခန်:ငှါးရင် အနည်:ဆုံး ၁၄၊၅ ယောက်လောက် နေတာ။ Singaporeက အိမ်ရှင်တွေက တခန်: လူ ၃၊၄ ယောက် ထားတာများ သူတို.က ပျင်းတောင် ပျင်းသေးတယ်။ အိမ်မှာ အိပ်ရုံ၊ ရေချိုးရုံပဲ နေပြီ: တချိန်လုံး ဈေးမှာပဲ နေကြတယ်. မြန်မာပြည်မှ စလုံးများက အိပ်လည်: သိပ်မအိပ်တယ်. အတွက်ကြောင့် သူတို.ရှိရင် လမ်:ထဲ သူခိုး မကပ်ရဲပါဘူးတယ.်။
အညာမှာ ပိုက်ဆံ ရှာရတာ ခက်တယ်။ ရန်ကုန်က ပိုက်ဆံ ရှာရတာ လွယ်တယ် ဆိုပြီ: ငရုပ်သီး ဆားထောင်းစား၊ အစားအသောက် ချွေတာတယ်. သူတို.ဟာ သင်းကြန် ဆိုရင် ကားစင်းလုံး ငှါးပြီ: ရွှေတွဲလွဲ ငွေတွဲလွဲ နဲ. အညာပြန်နိုင်ကြသူတွေပါ။
အစစအရာရာ အဆင်ပြေတယ်. ပြောင်းရွှေ့စရာ မလိုတယ်. သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။
Feel free to surf to my homepage :: nutcracker
ထိုင်းစတိုင်လ် ခရမ်းသီး ကြက်သားဟင်း